Creative Cloud sy ireo fanavaozana vaovao ao amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Creative Cloud ary fanavaozana vaovao ao amin'ny Photoshop
Betsaka amintsika no mahalala an'izany olona natokana ho an'ny famolavolana Matetika izy ireo dia mampiasa fitaovana maro hahafahana mahatratra ny tanjona kendrena, saingy misy fitaovana manokana izay eo amin'ny fiainan'ireo olona rehetra manao majika amin'ny sary ireo dia Adobe Photoshop.
Ary io ilay fanovana malaza an'ny fanontana Photoshop, dia manana fanavaozana vaovao, na dia tsy maintsy milaza aza isika fa olona maro no efa arak'ity fanavaozana ity ary tsy manao izany ny olon-kafa, saingy tsy maintsy tadidintsika fa rehefa misy zava-baovao tonga eny an-tsena dia misy olona manohana ny fanavaozana ary ny hafa manomboka mitsikera ny safidy vaovao rehetra entiny, toy ny tranga amin'ity fanavaozana vaovao ity izay mahazo ny anaran'i Creative Cloud.
2 Endritsoratra SVG
Ireo safidy vaovao miseho miaraka amin'ity fanavaozana ity dia nanova ny fomba fahitana zavatra kely, saingy zavatra matetika mitranga izany Adobe Photoshop.
Ny fanovana voalohany hitanao dia a varavarankely famoronana rakitra vaovao, hamonjy anao ny fotoana rehefa manomboka mamorona tetikasa vaovao ianao ary mifantoka ity fikandrana vaovao ity amin'ny modely sy preset, ireto dia mekanika roa mamonjy fotoana betsaka ary mampitombo ny vokatra.
Azonao atao ihany koa ny mahita endrika samihafa amin'ny endrika sy sary.
Ao amin'ny varavarankely, eo amin'ny sisiny ankavanana ianao dia afaka manao ampanjifaina presetEo amin'ny farany ambany dia afaka mahita fidirana amin'ny modely Adobe Stock ianao, afaka mitady fitaovana, menus, takelaka ary singa sasany haingana na mora aza ianao, satria tontonana fikarohana vaovao ity Izy io koa dia ahafahanao mitady tutorial sy fanampiana atiny, eo an-tanan'ny rantsan-tananao rehetra.
Zavatra nandrasan'ny maro tamin'ny fahatongavan'ny fanavaozana, dia izay azonao atao ny maka tahaka ny singa avy amin'ny SVG hahafahana mametaka ireo fananana endrika ho an'ny Photoshop Adobe XD. Ity fitaovana ity koa dia mifanaraka amin'ny TouchBar ankehitriny, ny efijery eo an-tampon'ny keyboard MacBookPro, izy irery ihany safidy topi-maso.
Azonao atao ny manome ny tetikasanao hampisondrotra ny fidirana amin'ny sehatra ary koa Modely Adobe Stock Azonao atao ny misintona ny fisie ary misafidy "vaovao" ary ankehitriny ny takelaka dia mampiseho fampahalalana momba ireo sosona samihafa ary koa momba ny antontan-taratasy izay manamora ny fanatanterahana fanitsiana samihafa.
Ny endri-tsoratra SVG dia mety tsara amin'ny hery manaova endrika mamaly, izay ahitanao loko isan-karazany sy anaovana gradien dia mety misy ireo vector sy raster.
Tokony holazaina ihany koa fa ny tranomboky dia manana modely Adobe Stock sy ny safidy handefasana rohy, na dia izao aza afaka mizara ny fidirana amin'ny famakiana fotsiny ianao amin'ny tranombokim-panjakana, ka raha manaraka tranomboky ianao dia hanavao azy ho azy.
Misy fanavaozana ihany koa ao Creative Cloud Asset, izay ahafahanao mitahiry, manadihady ary mamerina amin'ny laoniny ny tantaran'ny rakitra rehetra voatahiry ao Cloud Crative, ary koa ireo rakitra hita ao trano famakiam-boky, miaraka amin'ireo tetik'asa natao ho an'ny finday ary zava-baovao izay nentin'ity fanavaozana ity Tsenan'ny Typekit, izay ahafahanao mividy loharano avy amin'ireo orinasa manana orinasa malaza indrindra ao amin'ity sehatra ity ary azonao ampiasaina amin'ny tetik'asa tanterahina amin'ny alàlan'ity fitaovana ity, amin'ny fampiasana ny fampifanarahana loharano sy ny teknolojia, mba hamindrana ireo loharano Marketplace na aiza na aiza no tadiavinao.
Ity fitaovana ity koa dia manana fahombiazana bebe kokoa noho ny fanatsarana napetraka tamin'ny asany ary ny zavatra tena mahaliana momba ny fanavaozana rehetra dia ny modely sy ny fisehoan'ny fanombohana. Iray ity fampiharana be mpampiasa ny mpamorona rehetra, noho izany fanavaozana izany dia zava-dehibe ary manome kilalao betsaka rehefa mamorona.
Adobe Photoshop nanova tanteraka ny tontolon'ny famolavolana sary nandritra ny taona maro, tamin'ny ankapobeny, ka ny mpamorona rehetra dia tsy maintsy mahalala ny fomba fitantanana tsara ny safidy sy ny fitaovana rehetra ao anatiny mba hampivelarana ny zavatra noforoniny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Creative Cloud ary fanavaozana vaovao ao amin'ny Photoshop
Fitaovana hahitana ny typeface notadiavinao
Hatsarao haingana sy haingana ny kalitaon'ny sary ao amin'ny Photoshop